हार्दिक शुभकामना -::DainikPatra
नेपालको नयाँ संविधानको धारा नम्बर १६८ र त्यसका उपधाराहरूमा टेकेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सभासदहरूले प्रदेश नं. ५ को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने गरी बहुमतका साथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
यो प्रदेशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन हुने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुने भएको छ । त्यस्तैगरी अन्य प्रदेशहरुमा पनि मन्त्रीमण्डल गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ ।
प्रदेशसभाको प्रथम बैठकपछि मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया प्रदेश नं. ५ बाट चाँडो शुरु भयो र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि सबैभन्दा पहिला प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्ताव पेश भएको छ । अबका दिनहरूमा शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएपछि सातवटा मन्त्रालयको लागि एक दुई दिनभित्रै सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्नेछन् ।
त्यसपछि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाभित्र औपचारिक रूपमा विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । नेपालको इतिहासमा गणतन्त्रको सुन्दर बिहानीमा सबैभन्दा पहिला पाँच नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चुन्न र मन्त्रीमण्डल गठनको प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि बढ्नु हामी सबैको लागि खुशीको कुरा हो । यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा हरेक कामहरू निर्विवाद र चुस्त बन्दै गइरहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा झै पार्टीहरूलाई संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री चुन्न समस्या नपर्नु राजनैतिक दृष्टिले अनुकूल अवस्था हो ।
नेपाल परिवर्तनको शृङ्खलाबाट निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । परिवर्तनले अमूर्तबाट मूर्त रूप लिन थालेको छ । ५ विकास क्षेत्र १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको ठाउँमा ७ प्रदेश बनाइएको छ । त्यसरी नै झण्डै ४ हजार गाविस÷नगरपालिकाहरूका ठाउँमा नयाँ संरचना अनुसार ७ सय ५३ बनाइएको छ । यसबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिको संख्या तुलनात्मक रुपमा घटेको छ । पहिलो संविधान अनुसार झण्डै ९ हजार प्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभामा मतदान गरेका थिए भने यो संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभामा जम्माजम्मी २ हजारले मात्र मतदान गरेका छन् ।
यसले संघीयताको दिगोपनलाई दर्शाउँछ । अर्कोतिर विगतमा जस्तो अधिकारको केन्द्रीकरण भएको छैन । अधिकार विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय सरकारमा पुगेको छ । अहिले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधा घर आँगनमा पुगेको छ । आम जनताहरूले सरकार देख्न सुन्न र भोग्न पाउने भएका छन् । सबै काम स्थानीय सरकारबाट हुनुले जनताहरू हर्षित भएका छन् ।
अब परिवर्तन देखिने गरी आएको छ । विगतमा देख्न नसक्दा अन्यौलतामा परेका नागरिकहरू अब आश्वस्त विश्वस्त हुन थालेका छन् । प्रदेशका सीमा रेखाहरू देखेका छन् । स्थानीय गाउँ÷नगरपालिकाका सीमा रेखाहरू देखेका छन् । गाउँ नगरमा आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरू र उनीहरूले गर्ने औपचारिक सेवा प्रवाह देख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू, अब अमूर्त रूपमा हैन मूर्त रूपमा नै देख्न पाउँदै छन् । अब सबै कुरो ठीकठाक र संस्थागत हुन थालेको छ ।
अन्त्यमा नयाँ संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्दै गरेका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई दिँदै हरेक कामहरू धैर्यपूर्वक र कुशलतापूर्वक जनताको पक्षमा हुँदै जाऊन् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।